CALAAMADDA AADANAHA: WAA MAXAY KHATAR, SIDEE AYUU LOOLA YAABAA, IYO SIDA LOOGU DHAAFO - GURI, GURI
Qofna lama caymiyo! Boodada dadku: noocyada iyo waxyeellada
Gabagabaynta in boodada ay ku noolaan karto qofku si joogto ah ayaa loo diiday. Ma ku noolaanayaan bini-aadamka, sida xaqiiqda, bisadaha, eeyooyinka, xayawaanka kale iyo shimbiraha.
Waxay u isticmaalaan qof ahaan gaadiidka, haddii aysan si dhakhso ah u helin shay ku habboon (eeyga, bisad, jiir, iwm.) Ama "makhaayad" si loo helo qaybta muhiimka ah ee dhiigga.
Bukaan-yahannadani waa omnivores, ma aha kuwo picky, waxay ku quudin karaan dhiigga dadka iyo xayawaanka. Marka hore, soo ogow magacyadooda, meesha ay ku nool yihiin, sida ay u soo galaan guryahayaga.
Noocyada boodada ah ee dhaawici kara qof
Canine. Carriers waa eeyaha. Haddii xayawaanku ay la xiriiraan eyda cirridka. Waxaa jira caqligal sare oo cayayaanka noocan ah ee guriga.
Feline. Noocaani waxay tixgeliyaan milkiilayaasha bisadaha. Waxay ku quudisaa dhiiggeeda, waxay ku dhalataa sariiro, carafo bisil.
Sare. Jiirka, oo keli ah oo keli ah gurigaaga oo keli ah, ayaa kula wadaagi kara wada-noolayaashooda. Burburkii ka soo dhacay jiir ayaa dhab ahaantii ka tagi doona farcankiisa gurigaaga.
Digaag. Noocyada iyo boodada ee ku dhowaad dhammaan xayawaanka, shimbiraha gudaha waxaa laga helaa meelaha baadiyaha ah.
Earthworks. Guryahooda waxay doorteen lakabka sare ee dhulka. Markaad la shaqeyneyso dhulka (beerta, beerta khudradda) waxaad keeni kartaa dirxiga hoostiisa hoostiisa.
Sandy. Si xushmad leh u degso ciidda.
Aadan. Naasoorkan waxay ku martigelisay nin. Noocyadaasi waxay jecel yihiin inay ku quudiyaan dhiig bini'aadamka.
Dhanka kale, boodada oo dhan waa isku mid. Kala duwanaanta cabbirka, midabka. Jidhku wuxuu ku daboolan yahay qolof adag, oo labada dhinacba ku siman. Baaluq ma jiro. Lugaha lixaad, dhabarka dib u horumarsan. Waxay isticmaalaan boodada si ay u boodaan. Inkasta oo xaqiiqda ah in xajmiga cayayaanka 4 - 5 mm, ayaa boodaya. Haddii ayan jirin dad ku dhow, iyo baahida loo qabo cuntada ayaa jirta, boodhka bani'aadamku ma diidi doono dhiigga xayawaanka ku dhow.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawirka boodhadhka aadanaha:
Uumiintiyadu waxay u kala qaybsanyihiin laba qaybood oo kala duwan oo ah meesha ay degan yihiin:
Boodada basaasku waxay ka koobantahay dhammaan cayayaanka lagu qabto xaalad isku mid ah (dhulka hoose). Feline, canine, rat. Dhimashada, jilicsan ee jilicsan qashinka qashinka, dharka wasakhda ah, dharkataas oo lagu soo jiiday qaybta hoose ee dadka aan lahayn meel deggan. Qolalka diirran ee qoyaanka ah ee dhulka hoostiisa ayaa ka dhigaya isku dhufashada deg dega ah ee boodada, degsiimadooda ku yaal qolalka hoose ee dabaqyada hoose. Iyo dadka guri la'aanta ah iyo xayawaankuba waa kuwa sidayaal u leh cayayaankaas.
Baasaboorka basaska, helitaanka guriyahayaga, waxay helayaan qaybtooda dhiigga, ukumaha ukumo iyo sii wadaan in ay nala noolaadaan. Doorashada inta udhaxeysa aqalka hoose iyo aqalka, joojiya ikhtiyaarka labaad. Xaaladaha nololeed way ka fiicanyihiin, cuntada ayaa u dhow. Markaa waxay sariirta noqdaan, waxay ku yaallaan sariiro, alaab guri, roogag. Cunto badanaa habeenkii.
Maxay cayayaanka noocyada noocaas ahi u khatar yihiin bini'aadamka?
Si aad u fahamto khatarta ka jirta xaafadda, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida qoob-ka-dhufasho qof. Qalabka afka, ka duwan cayayaanka kale ee nuugista (kaneecada), ma leh wax tijaabo ah.
Jebinta maqaarka dadka Kalluumeysigu wuxuu isku dayaa in uu gaaro maraakiibta dhiigga sidaa daraadeed markaad madaxa ku xirto, kor u qaad xagga dambe ee jirka (sida saxda ah).
Ka dib markay sakhraanayso, waxay u soo baxdaa dusha sare, waxay tagtaa si ay u daryeelaan faraca. Haddii duufaan loo isticmaalo in lagu noolaado jiirka, waxay ka tagi kartaa maadada faafa ee lakabka subcutaneous.
Waa muhiim! Rat ayaa ah kuwa ugu khatarta badan ee cudurada faafa iyo dulin.
Ku dheji kaddib qaniinyada cas, cuncun.
Aragtida ugu daran waa carruurta la qaniinay. Maqaarka carruurta waa mid jilicsan, dhuuban, way sahlan tahay in la qaniinyo, sidaas darteed waxay carruurta habeenkii weeraraan. Qaniinyada ayaa aad u xanuun badan carruurta, waa cudurada xasaasiyadda. Waxay kaloo infekshin karaan ilmaha dulinka dulinka ah.
Ma jiraan meelo qaas ah oo qaniinyo qaniinyo ah. Waxay doortaan meelaha ay maqaarku jilicsan yihiin. Waa fikrad khalad ah in boodada ku dhuftey timaha madaxa ayaa laga yaabaa inay joogaan.
Caawin! Timaha aadanuhu maaha sida timaha xayawaanka oo aan ku haboonayn in la helo cayayaankaas halkaas. Laakiin way qani karaan.
Goobta ugu nugul qaniinyada waa lugaha. Xitaa haddii aad hurdo Haddii aad u socoto inaad ka shaqeysid qayb hoose ama qol kale oo laga yaabo in ay cayayaanka noqdaan, ku faafi lugahaaga iyo qaybaha kale ee jidhka, xiro dharka jidhkaaga ilaaliya.
Sida loo daaweeyo calaamadaha qaniinyada qaniinyada, akhriya maqaalka.
Si aan waligaa uula kulmin dhibaatadan, xusuusnow taas Ka hortagga waa ka fiican yahay daaweynta. Gurigaagu ha ahaado heer nadiif ah. Ka ilaali xayawaanka rabaayadda ah. Ha qashin aagga degaanka.